Fiantohana sy fiantohana amin'ny fitsaboana Therapy Proton - FAQs - Proton California
Proton FAQ fitsaboana fitsaboana
Moa ve ny orinasako fiantohana hiantoka ny vidin'ny fitsaboana Proton?
Miara-miasa amin'ny drafitra fiantohana rehetra i California Protons ary nifanarahana tamina fiantohana tsy miankina maro, ary koa Medicare. Ny ekipanay fiantohana dia miara-miasa akaiky amin'ny marary tsirairay mba hanampiana azy ireo hitety ny fizotrany. Satria tsy manam-paharoa ny marary tsirairay ary tsy mitovy ny drafitry ny fiantohana, tsy misy fomba tokana mifanaraka amin'ny rehetra. Raha mandà ny serivisy ny orinasam-piantohana iray dia manampy ny fizotran'ny fampakarana ny ekipa Fiantohana. Soa ihany fa matetika isika dia mahomby amin'ny fizotry ny fampiakarana raharaha. Jereo eto ambany ho an'ny FAQ hafa mifandraika amin'ny fiantohana.
Ahoana no ahitako raha toa ka miaro ny fitsaboana PROTON ahy ny orinasako momba ny fahasalamana?
Ny dingana voalohany dia ny fandaharam-potoana amin'ny consultation miaraka amin'ny mpisolovava marary any California Protons Cancer Therapy Center handinika ny drafitry ny fitsaboana anao. Aorian'ny fakan-kevitra nataonao, ny ekipa fiantohana sy ny dokotera anay dia afaka mifandray amin'ny mpamatsy anao amin'ny anaranao mba hamaritana ny fandrakofanao.
Call 858.299.5984 ny fandaharam-potoana ny fifampidinihana. Ny consultations dia voararan'ny fiantohana.
AHOANA NO ANTONON'NY CALIFORNIA PROTONS CANCER THERAPY CENTRE MANAMPY AHO HAHAZOANA FANARAHANA NY FITSARANA PROTON?
Na dia tsy azo antoka aza ny fandrakofana ho an'ny mpitatitra rehetra, ny solontenantsika sy ny mpitsabo dia hiasa mivantana amin'ny drafi-piantohana isaky ny dingana, anisan'izany:
Ny famaliana ny fanontaniany
Manome drafi-pitsaboana mampitaha
Rehefa ilaina dia mandefasa taratasy fangatahana fangatahana ho anao.
MITSY TOERANA PROTONAREO NY MEDICARE?
Ny Medicare matetika dia mandoa 80 isan-jaton'ny serivisy voaro. Amin'ny tranga maro, ny fiantohana Medicare faharoa dia handrakotra ny 20 isan-jato sisa.
Iza ireo orinasam-piantohana manokana dia miaro ny PROTON THERAPY ary amin'ny toerana inona avy?
Ny orinasam-piantohana tsy miankina amin'ny ankapobeny dia manarona ny fitsaboana proton amin'ny tranga tsirairay, miankina amin'ny karazana fivontosana, ny fitsaboana teo aloha, ny tantara ara-pitsaboana ary ny antony hafa. Ny California Protons Cancer Therapy Center dia miasa miaraka amin'ireo mpamatsy fiantohana isan-karazany, ary hiara-miasa amin'ireo mpamatsy tolotra ny manam-pahaizana momba ny fiantohana mba hamaritana ny fandrakofanao.
NA INDRINDRA NY INDRINDRA MITONDRA NY PROTON THERAPY, ahoana no ahalalako hoe inona ny vidin'entana ivelan'ny kitapo?
Ny ekipan'ny fiantohana homamiadana any California Protons Cancer Center dia hifandray amin'ny orinasa fiantohana anao mba hanamafisana ny fahazoana tombony, tombony, vola azo averina ary ny vola ilaina amin'ny fiaraha-miasa / fiantohana. Hofantarinay avy eo hoe ohatrinona ny vidinao any ivelany.
INDRINDRA IZAO RAHA TOA TSY MISY FANJAKANA NY MPITONDRA INSURANSIKO?
Ivontoerana fitsaboana fitsaboana kansera any California dia fifanarahana amin'ny orinasa fiantohana maro any ivelan'i California. Raha tsy nanao fifanekena tamin'ny mpamatsy iray izahay, dia hanao fifampiraharahantsika amin'ny serivisy rehetra efa nekena.
Azoko atao ve ny mahazo misarona ny THERAPY PROTON RAHA MANova ny ORINASA INSURANS?
Raha toa ka tsy manarona fitsaboana ny mpanome anao ankehitriny, dia mety hidika any amin'ny mpamatsy iray hafa ianao. Na izany aza, ny orinasam-piantohana tsy miankina dia manome fandrakofana amin'ny raharaha tsirairay. Tsy manoro hevitra momba ny fanovana ireo mpamatsy fiantohana izahay raha tsy hoe efa nanapa-kevitra ny handrakotra ny fitsaboana anao ny mpamatsy vaovao.
TON'NY INSURANSY VE NY FIVORIAMBE IREO PROTONIA?
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny orinasa fiantohana dia mandrakotra ny vidin'ny consultation. Raha ilaina dia hanampy amin'ny fahazoan-dàlana isika handrakotra ny consultation.
INDRINDRA IZAO RAHA NY TANINDRAZIKO INSURANS DIA MANDAINGA NY FONONON'NY PROTON THERAPY?
Amin'ny ankapobeny dia hametraka fitoriana amin'ny orinasa fiantohana ho anao izahay. Raha mbola voatsipaka hatrany ny fandrakofana, ny California Protons Cancer Therapy Center dia manolotra drafitra fandoavana vola amin'ny fihenam-bidy lehibe.
AHOANA NO TOKONY HITADRAHO AMIN'NY FANJAKANA NY FAHASALAMANA SADY NY FANJAKANA?
Raha mandà ny fiantsoana anao ny orinasa fiantohana, dia tokony handefa toromarika aminao izy ireo. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia ianao no tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana an'io dingana io, satria tsy maintsy ho avy amin'ny marary io fangatahana io.
Misy fihetsika azoko atao ve raha toa ka mandà ny fiangaviana ny mpikarakara ahy?
Raha nolavina ny antso, dia afaka manao dingana maromaro ianao:
Mitadiava fanampiana amin'ny iray amin'ireo orinasa tsy mitady tombontsoa sy tombony azo omena torohevitra. Firenena maro no manana mpisolovava mpanjifa fiantohana.
Miresaha amin'ny hafa izay nanana fitiliana mitovy ary tsaboina amin'ny fitsaboana proton.
Manaova fikarohana amin'ny Internet ho an'ireo olona voan'ny fitsaboana fitsaboana proton.
Mizara ny tantaranao amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao sosialy hambara amin'ny besinimaro ny ezaka ataonao ary hitady ireo hafa mety hanampy.
Raha mbola voatsipaka hatrany ny fandrakofana, ny California Protons Cancer Therapy Center dia manolotra drafitra fandoavana vola amin'ny fihenam-bidy lehibe.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fitsaboana proton na hiresaka amin'ny iray amin'ireo mpitsabo antsika dia miantso 858.299.5984.
Hahafantatra bebe kokoa momba ny safidy vidiny sy fandrakofana